Uthi u-Allah Ta'aala kwi-Qur'aan eNgcwele:"Ukukhohlakala sekuvele obala emhlabeni nasolwandle ngenxa yalokho okwenziwa yizandla zabantu ukuze (u-Allah) abazwise ingxenye yalokho abakwenzile ukuze babuye (baguquke ebubini) abakwenzayo." Surah 30:41
U-Allah Ta'aala Umisile (abantu) kwi-Qur'aan Engcwele nangezimfundiso zoMphrofethi waKhe othandekayo (Sallalahu alayhi Wasallam) imithetho ebanzi yokuziphatha,okungathi uma ilandelwa ilethe impumelelo kulomhlaba nakwelizayo. I-Qur'aan eNgcwele iyichaza kahle imithetho ka-Allah Ta'aala kanye nemivuzo etholakala ngokuyigcina. Iziveze ngokusobala futhi lezozenzo ezenqatshelwe ngu-Allah Ta'aala kanye nemiphumela yokweqa imingcele Ayimisile. Ngenxa yalokho, i-Islaam isiyalela ukuba sikugweme lokho okusisondeza ekwenzeni okubi. Ngakhoke,ukwehluleka kwethu ukwenza lokho, kungaba nemithelela emibi kangangoba u-Allah Ta'aala unokudedele zonke izifo. (Athi ziboneleni ngoba anifuni ukuyeka ukona). Uma sizicubungulisisa izinkinga zanamuhla, Hhayi ezibhekene kuphela nama-Muslim kepha nalezo ezibhekene neSintu ngokwengameleyo, asivume ukuthi ukwephula kwethu imithetho esiyimiselwe ngu-Allah Ta'aala sekufinyelele kulokho uMphrofethi oNgcwele uMohammad (Sallalahu alayhi Wasallam) ebekade asexwayisa ngakho eminyakeni engu-1400 eyadlula.
Ezinye izinto ezihlukumeza umphakathi yilesisifo esiwugawulayo igciwane lengculaza I-HIV ne-AIDS. Okungumphumela wokungathembeki emphakathini, wokuphula umthetho ka-Nkulunkulu uMdali waKho Konke. Isixazululo sakho konke lokhu ukulandela umthetho we-Islam othi: UMUNTU AKUFANELE AHLANGANE NOWESILISA NOMA OWESIFAZANE NGAPHAMBI KOMSHADO.
Ngenkathi ethi:"Uma ukuya ocansini ngaphambi komshado sekwanda ngalendlela engakaze ibonwe, kufanele wazi ukuthi lokhu kuyoletha izifo ezintsha eziyoba ngushayabhuqe, ngisho nobabamkhulu abangazange bezwe noma baguliswe yizo." (Ibn majah)
Kepha, uma sibukisisa, singathi lowo othi siyisijeziso sika-Alla Ta'aala, lowo ubeka u-Allah Ta'aala esimeni esingathandeki, (njengokuthi u-Allah Ta'aala akanalo iqiniso) Umenza Abonakale njengomahluleli onqala kakhulu kunokuba Abe OnoMusa, OneSihawu. Kodwa kubonakala kuyinto enomqondo ukuthatha lesisifo njengaleso umuntu asithole ngenxa yesenzo esithile asenzile.
u-Allah Uthi kwi-Qur'aan e-Ngcwele:"Uma ngigula, nguYe Ongelaphayo,futhi Ozongenza ukuba ngife, Abuye Angivuse futhi." Surah26:80-81
Enye yezinkinga ezibalulekile esifanele ukuyixazulula njengomphakathi, ukuthi siyashesha ukwahlulelana, sakhe isithombe esingafanele, ngamanye ama-Muslim. Siyabhaxekana, siyanyundana, sicabangelana okubi kunokuthi sisizane sakhe ubudlelwane obuhle nabanye abantu. Loluhlobo yokuziphatha lugxekwe kakhulu yi-Qur'aan..…Kanjena:
"O nina enikholwayo! Gwemani izinsolo ngoba ukusola kokunye kuyisono. Ningelusani ngobunhlola futhi ninganyundani. Angathanda yini omunye wenu ukudla inyama yomfowabo ofileyo na? Qha, Ningakwenyanya lokhu…Mesabeni u-Allah, futhi Unomusa, UneSihawu." Surah 49:12
Kumele sikwamukele ukuthi ingculaza iyinto ekhona emphakathini ngisho nakowama-Muslim imbala, futhi kubukisiswe ngelinjonjo.
Kumele sikhombise ngezenzo nangokukhuluma ukwenyanya kwethu isimilo esibi esiphathelene nezocansi.
Kumele sibagqugquzele labo abanalesisifo ukuba baye kofuna ukwelashwa ngesiqinisekiso sokuthi ngalokho asibacwasi.
Kumele sijule ekufundisaneni nokuqwashisana nge-AIDS.
Kumele sakhe izinhlaka zokuseka imindeni yalabo abane-AIDS.
Kumele sikhuthaze labo abane-AIDS ukuba baphumele obala baxwayise umphakathi ngemiphumela yesimilo esibi, sokungazihloniphi impilo, nokuba abantu bangaziholela ekufeni.
U-Allah uthwese ama-Muslim umsebenzi wokumisa uhlelo lokuziphatha ngendlela eqotho emhlabeni, lomsebenzi ungumgomo obopha wonke ama-Muslim ngalinye, elesilisa nelesifazane.
U-Allah uthi ngama-Muslim: "Niyisizwe esihle ngokwedlulele esiphakanyiselwe iSintu,niyalela okuhle nenqabele okubi, futhi nikholwa ku-Allah,ukuba abantu beNcwadi babekholiwe kwakuyokuba ngcono kubo: phakathi kwabo kukhona abathize abangamakholwa, kepha iningi labo liyizephulamthetho." Surah 3:110
U-Allah Usesinikile umuthi wokugoma. Ungumgomo we-IMAAN ne-ISLAM ukuze sivikeleke kuzo zonke izifo zomoya ezingaholela nasekonakaleni kwemizimba imbala.